Ahụekere butter bụ ezigbo ihe na-enye protein? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Ahụekere bọta butter - ịchọta ihe ngwọta
Ahụekere butter bụ ezigbo ihe na-enye protein?
Ahụekere bọtabara ọgaranya n'obi-gbasiri ikeabụba na bụ aezi isi protein, nke nwere ike inye aka maka ndị anaghị eri anụ na-achọ itinyekwuproteinna nri ha. 2-ngaji ngaji nkeahụekere bọtanwere ihe ruru gram 8 nkeproteinna 2 ruo 3 nke eriri.Sep 1, 2017
bicycle ọghọm las vegas
Gaa ahụekere, gaa bọta, gaa ahụekere, gaa bọta, laa (chịrị ọchị). (Obi ụtọ dị ụtọ) Ndewo, Abụ m Tracy Lockwood Beckerman. Onye na-edozi ahụ edozi aha na New York City.
Ọ bụ ọrụ m iji nyere gị aka ịchọpụta ihe ị kwesịrị ịdị na-eri na gịnị kpatara ya? Taa anyị na-echigharịkwuru enyi anyị nke nwere nnyapade, nnu, dị nro, na / ma ọ bụ nke jupụtara n’ahụ, bọta ahụekere. Think na-eche na ị bụ onye ezigbo, na ị bụ crispy. Iji chọpụta ma ọ bụrụ na ọ kachasị mma ebe ọ bụ achịcha sliced ​​ma ọ bụ ọ bụrụ na ahụekere butter bụ n'ezie omempụ na-amị amị na-edozi ahụ. (Ọchị) ♪ Ezigbo Criminal ♪ Nke ahụ bụ ihe anyị hụrụ na nwunye nke gị na nri. (egwu na-ada ụda) A na-agbasa ahụekere ahụekere.
Mgbe ahụekere gweriri ala, ha na-ewepụta mmanụ, nke na-eme ka ahụ ghara ịga were were. Ọ dịghị ihe dị ka butter. Imirikiti ndị ahụ na-ete ahụekere nwere ihe ndị ọzọ dị ka nnu, mmanụ, na shuga iji melite uto na ọdịdị. (Joy Music) A na-ahụekere ahụekere na ahụekere na ahụekere nwere ezigbo ahụ ike zuru oke ị hụrụ na Tinder, ahụekere nwere profaịlụ kachasị mma.
Nkọwa profaịlụ, nke ahụ bụ. M ga-enwerịrị swipe ozugbo m hụrụ bọta ahụekere. (mkpọtụ ngwa ngwa) Ha dị elu na protein iji mee ka ị nwee afọ ojuju.
Ha bụ nhọrọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-arapara na nri sitere na osisi ma ọ bụ na-achọ imezi egwuregwu protein gị. Ahụekere ahụekere, ọ bụghị naanị maka ụmụaka. Na mgbakwunye, ha nwere ezigbo abụba na-adịghị edozi ahụ, eriri, antioxidants, na ndị ọzọ.
Are bụ ngwugwu niile. Ahụekere nwekwara folic acid, nke na-enyere gị aka imekwu mkpụrụ ndụ ọbara uhie, si otú a na-eme ka ike gị rịa elu. PB na J, dị ka PB na yay.
Ha nwekwara antioxidant resveratrol, ihe mgbochi mkpali gị n'ụlọnga nke na-hụrụ na mmanya. N’ihi ya, mmanya anaghị ata obere butter. (Okwu ire) Dị ka ọtụtụ ọmụmụ na-ekwu, iri ahụekere nwere ike belata ohere nke ịrịa ọrịa obi, ọbụnakwa na-enye nsonaazụ cardioprotective.
Nnyocha egosila na iji ahụekere dị ka akụkụ dị mkpa nke usoro nri. Ya mere, nsogbu gị ịnwụ n'ihe izugbe na-agbadata mgbe ahụekere so n'ihe ị na-eri. Ahụekere M Ga-adị Ndụ Ruo Mgbe Ebighị Ebi ♪ Ya mere, Oge Ọzọ You Ga-eche Banyere dingtinye Ahụekere Na Nri Gị Ọzọ, Naanị Mee Ya You Maara na ọ na-ewe ahụekere 540 iji mebe peekere ite iri abụọ na abụọ? Chaị. (egwu dị egwu) Ọ dị mma, ya mere, lee ihe aekere ahụekere.
Ọ dị ezigbo elu na calorie. Yabụ na ị gaghị enwe oke ara iri ya. ụdị ụfọdụ nke carcinogenic onyinye. gbakwunyere ihe niile na-ezighi ezi site na nchekwa na-ezighi ezi, yabụ gbaa mbọ hụ na echekwala ahụekere gị na ebe dị jụụ, ebe akọrọ, kaa akara nke ọma, ma lelee ụbọchị ngwụcha.
niacin na ikpughe anyanwụ
Ọ bụrụ na ị nọ na nri paleo, a ga-egbochi butter ahụekere. A na-ahazi ahụekere dị ka mkpo, enweghị mkpụrụ, na mkpo nwere nnukwu lectins na phytic acid, nke bụ paleo no-no. N’ikpeazụ, ụfọdụ ụdị ahuekere ahụekere nwere ike ghara ịrịa ahụ ma ọ bụrụ na ha nwere ọtụtụ ihe mgbakwunye, mmanụ ihe oriri, emulsifiers, ma ọ bụ shuga, ya mere kpachara anya ịgụ akwụkwọ ahụ.
O nwere ike ịbụ na ị maara banyere bọta ahụekere, na-enweghị ihe ụtọ dị ụtọ ma ọ bụ ndị na-edozi ahụ, yana ndepụta dị mkpụmkpụ. Oge ụfọdụ, nnu, mmanụ na ahụekere. Dị ka ọtụtụ di na nwunye na-agụghị akwụkwọ, ọ ga-abụrịrị na a ga-enwerịrị ike na PB nkịtị ga-agbaji. (Drums roll) Enweghị ọsụsọ, naanị kpalie ya na iko.
Ọ bụrụ na PB nkịtị gị na-agbanwe agbanwe mgbe ị nọ n'ime ite ahụ, ọ nwere ike ịnwe ihe mgbakwunye na-enweghị isi. # Justsayin.Hey ahụekere butter, mụ na gị agaghị emebi.
Ma ọ bụ anyị ga-? (Cheeky music) Na ọgụ dị n’etiti ahụekere ahụekere, almọnd bọta, na cashew butter Sunflower butter nwere sọsọ acid mara mma karịa nke almọnd bọta, mana obere eriri. Mkpụrụ ọka pea nwere ọtụtụ antioxidants karịa mmiri ara ehi cashew, ma ọ dị ntakịrị abụba na-adịghị edozi ahụ. Na ahuekere butter nwere protein kachasị protein na ha niile. (olu ike) Gaa PB ọ bụ ụbọchị ọmụmụ gị, ee PB ọ bụ ụbọchị ọmụmụ gị dị ukwuu na mgbakwunye na nri siri ike.
O nwere abụba ndị dị mma, eriri, na protein, nke na-eme ka ọ jupụta, ahụike, na nke kachasị mkpa, na-ejuputa. Mgbe iwesa ke imeru ihe n'ókè na dị ka na-eje ozi size ụkpụrụ nduzi, ahuekere butter nwere ike ịmepụta ụfọdụ dị oké njọ ike di na nwunye; PB na celery, PB na banana, PB na chocolate, PB na Tracy. Ahụekere, Ahụekere ahụkere na Tracy. ♪ Oge adịghị anya ka ị ga-ahụ ihe ọzọ ị na-eme. Onwere onye bara uru na mmiri arae m.
Left hapụrụ ya ajar. (oke ọchị) Do ma ihe na - emekọ ọnụ karịa naanị PB na J? Gị na Ngwongwo YouTube Channel. Better ka mma ịdenye aha.
Dị ka ugbu a! #Justsayin.Just sayin '(na-agbanye mkpịsị aka gị) (ọchị) #Justsayin (na-apị mkpịsị aka gị) Oh my god (ochi) Nke ahụ siri ike.
Ọ dị mma iri butter bekee kwa ụbọchị?
Ahụekere bọtabara ọgaranya n'ọtụtụ nri - mana ọ dịkwa ọgaranya na calorie na abụba. Mgbegbasiri ikeabụba naahụekere bọtana-edozi ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-eri ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji zere uru ibu na-achọghị ma ọ bụ nsogbu ahụike. Azụmaahịaahụekere bọtaụdị na-agbakwunye sugars, mmanụ, na abụba.Ọnwa Itolu 29, 2020
M ga-ebu ibu ma m rie ahụekere kwa ụbọchị?
Ibu ibuna-ememgbe ịburu calorie karịa ka ị na-ere. N'ihi ya,ahụekere bọtabụ eleghi anya na-edugaerite uru ma ọ bụrụeri na imeru ihe n'ókè - na ndị ọzọ okwu,ọ bụrụị na-eri ya dịka akụkụ nke mkpa kalori ụbọchị gị.Ọnwa Ise 17, 2019
Ahụekere butter bụ mmiri ara ehi ma ọ bụ protein?
Ahụekere bọtaihe mejupụtara banyere 25%protein, na-eme ka ọ bụrụ osisi magburu onwe yaproteinisi mmalite. Agbanyeghị, ọ dị obere na amino acid methionine dị mkpa.30 Eprel 2018
Mgbe ị na-achọ nri dị mma, mkpụrụ nwere ike ịdị ka mmeri mmeri. Ma ụfọdụ mkpụrụ adịghị mma ma ọ bụ na-emerụ ahụ, na ọnụ ahịa mmadụ maka iwe ha nwere ike ịbụ ihe na-echegbu onwe ya nke ukwuu oge ụfọdụ iji bụrụ ihe ọzọ na-ewu ewu na mmiri ara ehi maka ndị na-achọ izere ngwaahịa mmiri ara ehi, mana ịdị mma ahụ niile na-abịa na ọnụahịa, ma ọ bụrụ ị na-anwa ime nhọrọ ndị puru iche i nwere ike chọọ ịkwụsị almọnd. Ihe karịrị pasent 80 nke almọnd ụwa si na California, ọ bụkwa ụlọ ọrụ ọtụtụ ijeri dollar nke ụkọ ọkọchị na akụkọ egwu ọhịa na steeti - ugbu a tụlee na mkpụrụ osisi almọnd ọ bụla ị na-eri were ihe karịrị galọn mmiri iji too.
Tribtụ a emeela ka ọ nwee mmetụta na-emetụta ọbụna salmọn ndị bi na mpaghara nke ihe mmiri dị ala na-eti. Ma chere ọ bụrụ na ọ kara njọ! Mkpụrụ osisi almond na-amị mkpụrụ na-enye nsogbu, mana almọnd na-elu ilu nwere ike igbu. almọnd na-atọ ụtọ, almọnd ndị na-elu ilu bụ n'ezie mkpụrụ osisi aprịkọt.
Ha na-enye almond almond dị ka ihe dị ka marzipan, mana iri ha nke ndu dị egwu. Mkpụrụ almọnd na-acha ilu nwere mkpụrụ osisi nke anụ ahụ na-agbanwe na cyanide belụsọ ma edozighi ya. Ihe omumu banyere ndi na -eri ha adighi nma bu ihe di egwu, tinyere okwu ebe nwanyi nwanyi di iri-isii na asaa riri nkpuru almọnd ole na ole n'ihi na ha chere na ha bu 'ogwu'.
mgbapụta igwe kwụ otu ebe
Ọbụna obere ego ahụ kpatara ọgba aghara na ọgbụgbọ, na mgbe ọ nwere iri na abuo ọzọ ọ nwere nkwarụ ma na-aga ụlọ mberede na nkeji 15. N'agbanyeghị ọtụtụ nkwupụta ịntanetị, n'ụzọ dị iche, ezigbo ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa na-adụ ndị mmadụ ọdụ ka ha zere iri almọnd na-elu ilu. Yabụ enwetala ndụmọdụ ahụike n'aka ndị bịara ịntanetị na-amaghị aha.
N'ikwu okwu banyere nsi dị egwu ego, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ego si India na Vietnam, ha adịghịkwa mfe ịhọrọ na nhazi.
Apụl Cashew nwere ọtụtụ ọkwa siri ike nke achọrọ, a na-egbukwa ndị ahụ na-egbu egbu. Ndị ọrụ kwesịrị otu ụgwọ ọrụ maka ịkpụpụ mkpụrụ osisi cashew, ọtụtụ n'ime ha nwere mbibi na-adịgide adịgide site na mmiri na-egbu egbu nke clams ahụ wepụtara. Magazin A na-ekpughere na-egosi na ego ndị na-akwụ ụgwọ na Vietnam na-abụkarị ogige ọrụ mmanye nke ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ, ha dekwara okwu ahụ 'cashews ọbara'. isi iyi nke akara ọkacha mmasị gị.
Ma chere, mkpụrụ na-egbu egbu anaghị akwụsị ebe ahụ
Igbe obi dị mma ma na-atọ ụtọ bụ otu n'ime mkpụrụ ndị ahụ ị ga-eri karịa, mana ị gaghị eri achịcha ịnyịnya. Ha yiri nke a, ma akpịrịkpa ịnyịnya adịchaghị mma. Ihe dị mma chestnuts nwere obere ihe na ọdịiche dị oke mkpa.
Sprint triathlon anya
Akụkụ ọ bụla nke ịnyịnya chestnut nwere nsi nke na-akpata ọgbụgbọ na, na oke zuru ezu, ahụ mkpọnwụ. Macadamia n uts N'ezie, mkpụrụ osisi macadamia na-atọ ụtọ, mana ha adịghị ahụ ike, dịka ị nwere ike iche. Nke ahụ bụ n'ihi na ijere mkpụrụ osisi macadamia n'otu iko nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ calorie 1,000, ọ dịkwa mfe iri ọkara ụbọchị oriri caloric gị mgbe ị nọ n'otu ọrụ ahụ nwekwara gram 102, nke karịrị gị Pennuts na-ewu ewu na pesto , mkpụrụ osisi pine nwere ike ịbụ naanị ihe na-emecha mee ka usoro nri sie ike, mana enwere otu ihe dị egwu na nke a na-apụghị ịkọwa akọwa nke nwere ike ime mmadụ ole na ole na-eji ha eri nri.
A na-akpọ ya 'pine ọnụ' ma ọ bụ ọrịa pine nut na ọ bụ ọrịa na-adịru nwa oge nke na-amalitekarị n'etiti awa 12 na 48 mgbe irichara mkpụrụ. Ruo nwa oge, ihe ọ bụla ọzọ na-atọ ụtọ, nke ọla, ma ọ bụ nke na-adịghị mma, ụfọdụ ndị kwụsịkwara ụtọ ya ruo ọtụtụ ọnwa. FDA nyere ịdọ aka na ntị na 2011 nke na-aga n'ihu taa, mana enweghị nkwenye nke ihe na-akpata ya ma ọ bụ otu esi egbochi ya.
Ọ bụ ihe a na-ejighị n'aka na nri abalị pụrụ iche na-abịa, ị nwere ike ịmị mkpụrụ osisi pine ahụ ma ọ bụrụ.
Ahụekereekere bụ protein zuru oke?
Ọ bụ ezieahụekere bọtaabụghị aprotein zuru ezu- nke pụtara na ọ nweghị amino acid dị mkpa nke ahụ chọrọ - ọ na-agụta mmadụ kwa ụbọchịproteinoriri.
Ego ole ka m ga-eri n’ụbọchị?
Gakwuru dọkịta gị ma ọ bụ dibịa nri ma ọ bụrụ na ị maghị etu ị ga-esi mee yaukwuuPB gịkwesịrị iri nri, ma ezigbo usoro isi mkpịsị aka dị gburugburu otu tablespoons abụọ aụbọchị. Newell kwuru na nri dị mma nke nwere nnukwu abụba dị ihe dị ka ngaji abụọ.Ọnwa Ise 15, 2018
Ego ole ka m nwere ike iri n'ụbọchị?
Ikwusi ozi ubochi nile bu ndi akaahụekere(1-2 ounces dabere na gị size) ma ọ bụ 2 tablespoons nkeahụekerebọta.
Kedụ ka m ga-esi eri calorie 3000 kwa ụbọchị?
Ihe oriririe, nri iji zere
Na-eri iheKalori 3,000makaụbọchịsite n’ozuzu, nri anaghị edozi ma-ọbụ nke pere mpe, dịka mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, ọka nile, abụba siri ike, na protein na-edozi ahụ, nwere ike ịbụ ihe ịma aka.Ọgọst 29, 2019
Ahụekereekere dị mma maka cholesterol?
N'ihi oke abụba ndị na-enweghị afọ ojuju,ahụekere bọtanwere ike inye aka belata LDL mmadụcholesteroletoju. Inwe ogo LDL kachasị mma jikọtara ya na obere nsogbu nke ọrịa obi. Nnyocha e mere n’afọ 2015 gosiri na ndị mmadụ na-eri mkpụrụ akụ́kụ́ nwere ike ịnwụ ọnwụ ọnwụ gbasara ọrịa obi.Abụọ 4, 2021
Kedu ihe na-eme n’ahụ́ gị mgbe ị na-eri nri ahụekere kwa ụbọchị?
Ọbara ọgaranya n'ọtụtụ nri, gụnyere protein na magnesium, nke nwere ike inye aka ichebeiheobi ma jikwaa shuga shuga naahụibu ibu. Otú ọ dị,na-eri nrinke ukwuuahụekere bọtanwere ike ịbawanyekaoriri mmadụ kwa ụbọchịnkejuputara na abụba, sodium, na calorie.
Gịnị na-eme ma ị na-eri ahụekere kwa ụbọchị?
Ọ bụrụị na-eri ahụekere kwa ụbọchị gịnweta protein, vitamin, mineral na ndị ọzọ!Ahụekerenwere protein karịa mkpụrụ ọ bụla (7g kwa ọrụ), nwere ihe karịrị vitamin 30 na mineral dị mkpa, ha bụkwa ezigbo isi iyi nke fiber na ezigbo abụba.
Ego ole protein dị na ngaji nke ahụekere butter?
Protein na Ahụekere Butter. Nhọrọ kachasị amasị maka okwu ahụ bụ 'Ahụekere Ahụekere' bụ 1 ngaji nke Mpeekere Mpekere Mpekere (yana Nnu) nke nwere ihe dị ka gram 4 nke protein. A na-egosi ego nke protin maka ụdị dị iche iche na oke ọrụ ahuekere ahụekere n'okpuru.
Kedu ihe na-eme ka ahụekere butter gbasaa na protein?
Ejiri dị ka nri nri / nri zuru oke, 1 inye ike nke ike a nwere pb nwere protein niile, abụba ndị dị mkpa na ọnụ ọgụgụ carbs kwesịrị ekwesị maka onye ọ bụla dị mkpa gbasara ịhapụ ahụike na ahụike ha. Anụ niile, enweghị gluten, ndị na-abụghị gmo, nke nwere nnukwu protein, nwere shuga na nnukwu fiber. Akwa protein ahuekere butter gbasaa.
Kedu ihe ndị dị na protein ahụekereekereekere.
Gwakọta ihe niile na-eme ka protein megharịa ọnụ ruo mgbe ị ga-eji ire ụtọ. Wunye n'ime iko ma nwee obi ụtọ kacha mma na-edozi ahụekere mgbe ọ bụla! Ogwe ahụekere ahụekere - 4 Akụrụngwa! N’ime nkeji ole na ole, ị ga-enweta ọ theụ kachasị mma protein peanut butter protein-naanị ihe dị mfe 4 ma jupụta na gram iri na asaa nke protein.